अस्पतालमा गम्भीर पति, गर्भवती पत्नीले ४ तलाबाट हाम्फालिन्, लाशबाट जन्मे जुम्ल्याहा – PathivaraOnline
Home > समाज > अस्पतालमा गम्भीर पति, गर्भवती पत्नीले ४ तलाबाट हाम्फालिन्, लाशबाट जन्मे जुम्ल्याहा
अस्पतालमा गम्भीर पति, गर्भवती पत्नीले ४ तलाबाट हाम्फालिन्, लाशबाट जन्मे जुम्ल्याहा
admin November 27, 2018 समाज 0
भोपाल। भारतको भोपालमा एउटा अत्यन्तै कारुणिक र आश्चर्यजनक घटना भएको छ । यहाँ निमोनियाले पीडित भएर अस्पतालमा भर्ना भएका एक युवकको हालत बिग्रिएको थाहा पाएपछि उनकी गर्भवती पत्नीले एक निर्माणाधीन भवनको चौथो तलाबाट हाम्फालेकी छिन् । छिमेकीले उनलाई अस्पताल लिएर गए । अस्पतालमा आमाको ज्यान गयो र उनले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माइन् । तीन घण्टापछि दुवै नवजात शिशुले पनि आँखा नखोली ज्यान गुमाए । त्यसको केही समयपछि भेन्टिलेटरमा राखिएका पतिको पनि ज्यान गयो ।
मृतक महिलाका दाजुका अनुसार उनलाई पतिको मृत्यु भइसकेको जस्तो लागेपछि उनले आत्महत्या गरेकी थिइन् । यो दर्दनाक घटना सोमबार दिउँसो करिब २ बजे कोलारको स्वरुप साइनाथ नगरमा भएको हो । यहाँ ३७ वर्षका मनोज गोहे पत्नी गायत्रीसँग बस्थे । मनोजले कार फाइनान्सको काम गर्थे । यी दुईले १० वर्षअघि प्रेम विवाह गरेका थिए । १२ नोभेम्बरका दिन मनोज खोकी र ज्वरो आएपछि जाँच गराउन बंसल अस्पताल पुगे । डाक्टरले समस्या बढ्न सक्ने भनेर उनलाई भर्ना गरे ।
गायत्रीको पेटमा ७ महिनाको गर्भ थियो त्यसैले मनोजले उनलाई अस्पताल नआउन भने । सोमबार दिउँसो साढे १ बजे गायत्रीले अस्पतालमा दाजुसँग बसेका देवर तरुणलाई फोन गरिन् । उनले पतिको हालखबर सोध्दा तरुणले उनलाई अस्पताल आउन भने । तरुणको कुरा सुनेपछि गायत्री घरबाट निस्किन् । त्यसपछि आफू बस्ने कोलोनीअगाडिको एक निर्माणाधीन भवनमा गएर ४ तला माथिबाट हाम्फालिन् ।
गायत्रीका दाजु नरेशका अनुसार बिहेको १० वर्षसम्म उनीहरुका सन्तान थिएनन् । धेरै प्रयासपछि गायत्री गर्भवती भएकी थिइन् । लामो प्रयासपछि घरमा सन्तान जन्मिन लागेकोले उनीहरुको घरमा खुसीको माहोल थियो । तर, गायत्रीले हाम्फालेपछि उनका सन्तानले आँखा पनि खोल्न नपाइ ज्यान गुमाएका छन् । जुम्ल्याहा सन्ता एक छोरा र १ छोरी भएको बताइएको छ ।
डिसीनेपालबाट साभार गरिएकाे सामाग्री ।
आन्टी सिन्ड्रोमः कतै तपाई पनि शिकार हुनु भएकाे त छैन? कसरी छुट्कारा पाउने? हेर्नुहाेस
भर्खरै कोरियाबाट अायो नेपाली कामदारहरूका लागि यस्तो खुशीकाे खबर
परिवार त्या गेर सं क्रमितको उपचारमा लागेकि यी न र्स आफै सं क्रमित भएपछि…
यिनै हुन् जसले आज अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो, ओतका लागि रेनकोटको सहारा लिएका सुमनको रेनकोटले नै लियो ज्यान
ग्यासको सिलिन्डर भर्न हिडेकि श्रीमति उतै ना ठोसंग फ रार भइन्, श्रीमान रु एर बे होस् छन् (भिडियो हेर्नुस्)